စေပီယံ – Min Thayt
မူရင်း – Sapiens (A Brief History of Humankind)
မူရင်းစာရေးသူ – Yuval Noah Harari
ဘာသာပြန်သူ – နေသီဟ
ဘာသာပြန် / လူ၏မူလ – သမူဟ
• လူ့အဖွဲ့အစည်းကို နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
• လူ့သမိုင်းကို နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
• ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
• လူမှုဗေဒကို နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
• မနုဿဗေဒကောက်ကြောင်းကို နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ပါ။
• Behavioural Science ကို လေ့လာဖို့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ပါ။
• လူမှုစိတ်ပညာကို နားလည်ဖို့ ဒီစာအုပ်ကို လေ့လာပါ။
• လောကဖြစ်စဉ် ဖြစ်မှု/ပျက်မှုကို သိဖို့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။
စာအုပ်အညွှန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသိနောက်ခံမြင့်မြင့်မားမားရှိပြီး ဘာသာစကား ခပ်မြင့်မြင့်ရှိသူတွေဟာ အင်္ဂလိပ် လို ရေးသားချက်ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မူရင်းကတော့ ၂၀၁၁ မှာ၊ ဟီးဘရူးဘာသာနဲ့ ရေးတယ်။ ၂၀၁၄ မှာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားဖြန့်ချိတယ်။ အခုမြန်မာလို ထွက်လာပြီ။ တချို့လည်း အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ တွဲပြီး ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်လို့ ရတယ်။ အင်္ဂလိပ် စာအုပ်ကလည်း ဝယ်လို့ လွယ်တယ်။ မြန်မာလိုကလည်း ဘာသာပြန် ချက် ထိမိတယ်။ မူရင်းအာဘော်ကို ဖော်ညွှန်းနိုင်တယ်။ ဘာသာပြန်ချက်က ရှင်းတယ်။ မထောင့်ဘူး။ မတောင့်ဘူး။ ဖတ်ရလွယ်တယ်။ သမိုင်းတို့၊ မနုဿဗေဒတို့၊ လူမှုဗေဒတို့… အကြောင်း ဗဟုသုတနောက်ခံ များများရှိထားရင် ပိုပြီး ဖတ်ရလွယ်လိမ့်မယ်။
• ပုံပြောင်းလာတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်း
• ဦးနှောက်စွမ်းရည် ၊ လူ့စွမ်းရည်၊ စွန့်စားသွားလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်း
• ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ် အကြောင်း
• လူတန်းစား၊ အုပ်ချုပ်သူ အုပ်ချုပ်ခံ စတဲ့ လူသားဘဝတွေအကြောင်း။
စေပီယံ (လူသားမျိုးဇာတ်သမိုင်းအကျဉ်း) လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို တဖြည်းဖြည်းဖတ်ပြီး ကမ္ဘာကကြီးအကြောင်း ရှုထောင့်တမျိုးကနေ ကျနော် နားလည်လာမိတယ်။ ရှုမြင်ပုံအသစ်တချို့ရလာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူသားတွေဟာ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ရှင်သန်လာတာ ကြာခဲ့ပြီ။ လူသားသမိုင်းရဲ့ ပြောင်းလဲဖြစ် တည်လာပုံဟာ ဘယ်လိုပါလဲ။ စေပီယံက ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စေပီယံက ရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ လူမှုသိပ္ပံမှာ social construct ဆိုတာ ရှိတယ်။ လူတွေကပဲ လူမှုပြဌာန်းချက်တွေကို ဘယ်လိုသိုင်းဝိုင်းတည်ဆောက်သလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ လူမှုအရင်း၊ လူမှုတန်ဖိုး၊ လူမှုပြဌာန်းချက်၊ လူမှုအဆောက်အအုံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့အပြုအမူ၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယုံမှတ်လက်ခံထားမှု၊ စွဲမြဲနေသော ခံယူချက်တွေ၊ အမြင်ရှုထောင့်တွေ… စတာတွေကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့ ရှင်သန်မှုဟာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲလာပါသလဲ။ လူသားတွေဟာ ဘယ်စိတ်နဲ့ ရှင်သန်သလဲ။ လူ့အပြုအမူတွေဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ။ ကျနော်တို့ နေတဲ့ကမ္ဘာကြီး။ ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်။ ကျနော်တို့ လူမျိုး။ ကျနော်တို့ သွေးသား။ ကျနော်တို့ ကွန်မြူနတီ။ ကျနော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်း။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ကျနော်တို့ ဝန်းကျင်။ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း …. ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်တည်ပြောင်းလဲနေပါသလဲ။
ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ အတွင်းစိတ်ကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့ အတိတ်ကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့ ပစ္စုပ္ပန်ကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ ကျနော်တို့ အနာဂတ်ကို မှန်းဆနိုင်ဖို့ လိုတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဘာဖြစ်နေသလဲ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဘာဖြစ်နေသလဲ။ ကိုယ့်အနီးအနားလေးမှာ ဘာဖြစ်နေ သလဲ။ ကျနော်တို့နဲ့ ဝေးကွာဟာ ကမ္ဘာဟာ ဘယ်လိုလဲ။ အဝေးကြည့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ အနီးကြည့် ကြည့်ဖို့လို တယ်။ စေပီယံက ဒါကို ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ အသိစက်ဝန်းကို ဒီစာအုပ်က နည်းနည်းချဲ့ပေးနိုင်လိမ့် မယ်။ ခင်ဗျားဟာ ခင်ဗျား ကမ္ဘာကိုပဲ နားလည်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ တခြားကမ္ဘာကိုလည်း နားလည်ရမယ်။ သူများကမ္ဘာကိုလည်း သိထားသင့်တယ်။ ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာပဲ ကျောက်ချမနေနဲ့။ ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်နေသလဲ သိအောင်လုပ်။ လောကကြီး ဘာဖြစ်နေသလဲ နားလည်အောင်လုပ်။ ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ကို နားလည်ဖို့ တခြားသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်း မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်မြင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ အတွင်းကျုံ့အမြင်တွေများနေတယ်။ ရှေ့ကြည့်၊ မျှော်ကြည့်၊ ဆင်ခြင်ကြည့်၊ ကန့်လန့်ဖြတ် ကြည့်၊ ဖောက်ထွက်ကြည့်….၊ ကျော်ကြည့်၊ အနားနားကပ်ကြည့်…. အမျိုးမျိုးကြည့်။
မကြည့်ရင် မမြင်ဘူး။ မမြင်ချင်တာကိုလည်း မကြည့်ဘူး။ ကြည့်တိုင်းလည်း မမြင်တတ်ဘူး။ မြင်ချင်မှ ကြည့်ချင် စိတ်ဖြစ်တယ်။ ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်မှာလည်း ဆန့်ထွက်လေ့လာတယ်။
လူသာ သေရင် မြေကြီးဖြစ်သွားတာပဲ။ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အကျိုးပြုမှုဟာ မြေစီဩဇာဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ အဆင့်ကနေတော့ ကျော်သင့်တယ်။ မသေခင်မှာ အသိဉာဏ်စက်ဝန်းကို ချဲ့ထွင်ရတာ ရင်ခုန်စရာ။ စွန့်စားမှု တစ်ခုပဲ။ ဒီတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်စေချင်တယ်။ ခင်ဗျား အသိစက်ဝန်းကို ရှုထောင့်သစ်တစ်ခုနဲ့ ချဲ့ထွင်နိုင်မယ် လို့ ထင်တယ်။ ဖတ်ရခက်တယ်လို့ မထင်နဲ့။ တခြားသမိုင်းစာအုပ်တွေ ပြန်လှန်ဖို့ လိုချင်လိုမယ်။ လူသားမျိုးဇာတ်သမိုင်းကို မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီ့နောက်ခံအသိကို ဖြည့်ပြီး ဖတ်ရင် စေပီယံက ပိုပြီး ဖတ်လို့ လွယ်မယ်။ ပိုပြီး နားလည်ဖို့ လွယ်နိုင်တယ်။
ဘာသာပြန်သူ နေသီဟ ဆိုတာကို ကျနော် မသိဘူး။ သူဘာသာပြန်ထားတဲ့ “Why nations failed” စာအုပ်ကိုတော့ ဝယ်ထားတာကြာပြီ။ အခု စေပီယံ ကို ဝယ်မှပဲ သေချာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ စေပီယံကို မြန်မာလိုပေးထားတဲ့ နာမည်က ၊ “လူ၏ မူလ – သမူဟ” တဲ့ ။ စကားလုံးက လှတယ်။
မူရင်းက ကောင်းသလို၊ မိတ္တူကလည်း ကောင်းတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖြစ်ပျက်သဘောနဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ၊ လောဘတွေနဲ့ လူ့ချင်ခြင်း၊ လူ့ဒုက္ခတွေကို ရေးထားတယ်။
သုတေသနကို အခြေခံတဲ့ ကျမ်းလို့ ပြောလို့ရမယ်။
Evidence-based လေ့လာချက်တွေဟာ ရှင်းလင်းတယ်။ ထိမိတယ်။
ကိန်းဂဏန်းတွေ ပါပေမယ့် ၊ မငြီးငွေ့ဘူး။
ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ ချည်းကပ်မှုတွေလည်း တွေ့ရတယ်။
ဒီတော့ ဖတ်ရတာ အရှုံးမရှိဘူး။
Yuval ရဲ့နောက်ထပ် ဘာသာပြန်တွေလည်း မြန်မာလို လုံးချင်းထွက်လာနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
နေ့စဉ် အိပ်စားကာမ နဲ့ပဲ ရှင်သန်ရတာ သေးသိမ်လွန်းပါတယ်။ နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးအတွက်ချည်းပဲ လုံးပမ်းနေရတဲ့ ဘဝက ကျဉ်းမြောင်းလွန်းပါတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက်မှာတော့ အသိဉာဏ်စက်ကွင်းကို နည်း နည်းချဲ့ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားစမ်းပါ။ ပျော်တတ်ရင် ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ချည်းကပ်ဖို့ အထောက်အကူပြုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းလည်း သိအောင်လုပ်၊ လူသားသမိုင်းထဲက ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းအကြောင်းလည်း နားလည်အောင်လုပ်။ မြန်မာကြည့်ကြည့်။ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
နေ့လယ် ၃း၁၅
၉ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၂၀
Previous post စာဖတ်သမားသို့/
Next post စာရေးခြင်းကိစ္စ